IFama ezolileyo-iKhabhinethi yaseWoodland eZithekileyo
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLouise
Ikhabhinethi yeplanga yeeshingled iphumile ngokupheleleyo kwigridi.
Ukufikelela kwikhabhinethi kukuhamba okufutshane kwiplanga elincinci kwindlela emxinwa ejiko ukusuka kwindawo yokupaka.
Yakhelwe phezu kweentsika ikhabhini phezu kwembonakalo yomhlaba weefama kunye nemithi enombono omde ezantsi entlanjeni ukuya kwiinduli ze-English Harbour.
Ikhabhinethi inegumbi lokulala elikhulu elinebhedi eneplanga enepowusta enenethi yeengcongconi. Iingcango ze-barn zivulelwa kwibalcony esecaleni, igumbi lokuhlambela elinomoya ovulekileyo elineshawari yamanzi emvula efudunyezwe lilanga kunye nekhitshi eligcweleyo. Isibhakabhaka sobusuku obumangalisayo.
Ikhabhinethi ibizwa ngokuba yi "Logwood" emva komnye wemithi ejikeleze kuyo intliziyo yayo idala idayi yendalo kuphela esasetyenziswayo.Le dayi yayikhe yaxabiseka kangangokuba kubonakala ukuba abantu babucala babeza kubamba iinqanawa ezazisa lo mthwalo eYurophu.Intyatyambo yenza ubusi obumangalisayo.
Ukwakha iLogwood sasebenzisa izinto ezininzi ezihlaziyiweyo kangangoko kunokwenzeka.Iingcango kunye nezivalo zonke zindala, uninzi lwazo zishiywe kunye nomsebenzi wazo wepeyinti wokuqala.Umphandle ugqunywe ngeeshingles zeplanga kwisitayile saseCaribbean sakwantu.
Ikhabhinethi kwindawo encinci yemithi eyayicela nje into encinci - ukukhetha indawo yokujonga kwayo.Endulini, kwaye yakhiwe phezu kwezibonda ikhabhathi ijonge imithi ezantsi kwintlambo ende yokujonga ngasemva kwe-English Harbour, malunga neekhilomitha ezisi-7.Sizamile ukugcina le nkuni encinci, ke asizange senze indlela eya kwi-cottage.Icandiwe, umgama wemizuzu emi-3 ukusuka kwindawo yokupaka iimoto, utyhutyha emithini kwindlela encinci.Uya kudinga i-4WD ukuya kwindawo yokupaka: (jonga icandelo elingezantsi "Ukujikeleza").
Nangona i-cottage ijongeka ngokwesiko enyanisweni iyitekhnoloji ephezulu! ezizimeleyo ngokupheleleyo, ziqhutywa kuphela ngamandla elanga anezibane ezingama-24 zevolthi, iimpompo kunye nefriji.Kukho amandla e-110v kunye neesokethi zase-USA. Amanzi emvula aqokelelwa eluphahleni, kwaye afudunyezwe ngelanga.
Igumbi lokulala likhulu, 16 ft X 16 ft: umgangatho omhlophe weplanga, ipowusta ephindwe kabini eqingqwe ibhedi yeplanga efakwe inethi yeengcongconi.Kukho iingcango ezindala ezivaliweyo ezivula i-balcony esecaleni, kunye neengcango ezivaliweyo ezivuleleka kwibalcony ephambili.Zonke iingcango neefestile zinezikhuselo zeengcongconi.
Kukho ikhabethe enkulu eneshelufu eninzi kunye nendawo yokuxhoma-idesika phantsi kweefestile ukuba uziva uphefumlelwe ukuba ubhale okanye uzobe, kodwa usenayo i-intanethi engenazingcingo!
Ngaphandle kwegumbi lokulala ligumbi lokuhlambela elivulekileyo elineshawa enkulu yamanzi emvula, isitya kunye nosetyenziso lwamanzi aphantsi.
I-Antigua sisiqithi esisezantsi - nto leyo ebangela imvula ephantsi yonyaka - ngoko ke kufuneka siqaphele ukusetyenziswa kwamanzi.
IBalcony yi-10 ft x 24ft kwaye yenza iindawo zokuhlala kunye nezokutyela. Ikhitshi livula ngeengcango ezibanzi ukuze icala lonke livuleleke kwibalcony kwaye itafile yokutyela ifikeleleka lula.Kukho ifriji esebenza ngelanga enefreezer elungileyo kunye nesitovu segesi esi-4 sepropane esineoveni.Ikhitshi inazo zonke izixhobo oya kuzifuna - kunye nezinto ezisisiseko zelari. Siza kukubonelela ngeegrosari zokufika kwakho isidlo sangokuhlwa kunye nesidlo sakusasa, ukuba ungathanda ukuhlala ekhaya ngobusuku bakho bokuqala.
4.98 · Izimvo eziyi-96
Ubumelwane buthule kakhulu, indawo elungileyo yokuhamba-indawo yokulima.
Eyona ngxolo yasebusuku ngamasele emithi, iiqakamba kunye nedonki engaqhelekanga!Abanye abantu banxiba ii-earplugs de baziqhelanise nazo.
Iivenkile zokutyela ziya kwiZibuko lesiNgesi.Ukukhetha okulungileyo kwindawo encinci ehambayo kwaye kuphela malunga nemizuzu engama-20 ukusuka kwikhabhinethi.
Xa uphuma ebusuku nceda izibane endleleni zimiselwe ukuba ziphume ngo-11pm.
Ndihlala kude - imizuzu embalwa yokuhamba.
Ndishiya iindwendwe zam zodwa - kodwa ndiyavuya ukuba nabani na ufuna ukuza kundibuza imibuzo, okanye afumane ikomityi yekofu.Ndifumaneka ku-(SENSITIVE CONTENTENTS HIDDEN) okanye inombolo yam ikwifowuni yasekhaya.
Ndishiya iindwendwe zam zodwa - kodwa ndiyavuya ukuba nabani na ufuna ukuza kundibuza imibuzo, okanye afumane ikomityi yekofu.Ndifum…